Inkungu noma inkungu, yini umehluko phakathi kwazo? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela uke uzibuze ukuthi yini inkungu, akunjalo? Umbuzo abaningi bethu abazibuza wona, noma ebuntwaneni lapho sivuka sibona ukuthi indawo esihlala kuyo kubukeka sengathi isiphenduke 'isipoki'. Yebo, kulokhu okukhethekile angizokhuluma nawe kuphela ngenkungu, kodwa futhi mayelana ne inkungu, ngoba yomibili imiqondo ivame ukudideka.
Ngale ndlela, lapho ziphinde zenzeka, uzokwazi yimuphi umehluko okhona phakathi kwenkungu nenkungu.
1 Yini inkungu?
1.1 Ikhiqizwa kanjani?
1.2 Izinhlobo zenkungu
1.3 Ingabe iyingozi empilweni?
2 Yini u-haze?
3 Futhi inkungu yehluke kanjani kunenkungu?
Inkungu iyi- i-hydrometeorNgamanye amagama, iqoqo lezinhlayiya zamanzi, eziwuketshezi noma eziqinile, ziyawa, zimiswe emoyeni noma ziphakanyiswe ebusweni bomhlaba ngumoya, noma zibekwe ezintweni ezisemhlabathini noma emkhathini okhululekile. Ikhiqiza ukubonakala okungaphansi kwe-1km. Lezi zinhlayiya zamanzi azinkulu ngokwanele ukuthi zingancishiswa amandla adonsela phansi, ngakho-ke zivame ukumiswa.
Ikakhulukazi phakathi nezinyanga zikaDisemba noJanuwari eSpain, izinkanyezi zenkungu cishe kuzo zonke izimpondo zemiphakathi eminingi. Kwakhiwa ezimeni zokuzinza ngokuphelele, lapho kune-anticyclone futhi kungekho moya ovunguzayo. Kwenzeka lapho izinga lokushisa lezingqimba ezingezansi zomkhathi liphansi kunalezo eziphakeme, noma yini efanayo: lapho kubanda olwandle kunezintaba.
Noma singacabanga ukuthi inkungu ihlala ifana kuzo zonke izindawo, iqiniso ukuthi izinhlobo ezahlukahlukene ziyahlukaniswa:
Kushisa bhé kule ndawo: okuyinto esiyibonayo ngemuva kokushona kwelanga ngobusuku obungenamafu, ekwindla. Inobukhulu bemitha elilodwa futhi ayihlali isikhathi eside.
Emhlabeni: kuyinkungu yemisebe, kodwa ekha phezulu. Kumnyama ngaphansi kwama-60% esibhakabhaka futhi kungadluleli phansi emafwini.
Isikhangiso: Lapho inqwaba yomoya oshisayo, ogcwele umswakama udlula enhlabathini ebandayo, kukhiqizwa lolu hlobo lwenkungu. Kuvamile kakhulu ogwini.
Umusi: ibonakala lapho umoya obandayo udlula emanzini afudumele. Le nkungu lapho singabona khona ezindaweni ezibandayo.
Ukuzikisa: Uma kuqala ukuna futhi umoya ngaphansi kwefu womile, impela ukubonakala kwethu kuzoncipha.
I-Hillside: Kwakhiwa lapho umoya uvunguza ohlangothini lwentaba.
Kusuka esigodini: lolu hlobo lwenkungu lungumphumela wokuguquka okushisayo, okubangelwa umoya obandayo osala esigodini, ngenkathi umoya oshisayo udlula phezu kwawo.
Yeqhwa: Kwenzeka lapho amaconsi amanzi afriziwe emiswa ngaphezu komhlaba. Kuvamile kakhulu ezindaweni ezibandayo.
Ukuthambekela okuphezulu: kwenzeka lapho kunokwehla kwengcindezi nokuphakama.
Ingabe iyingozi empilweni?
Lutho neze. Imvamisa kucatshangwa ukuthi yebo, ukuthi kungasidalela umonakalo, kepha iqiniso ukuthi lokho okuyinkungu akulimazi. Umoya ozowuphefumula umehluko kuphela onawo nalowo esiwuphefumulayo noma yiluphi olunye usuku yilowo igxila enanini elikhulu lomhwamuko wamanzi.
Kepha okufanele ukukhumbule ukuthi lezo zinsuku kuzoba nokungcola okuningi kakhulu ngokungashayi umoya, ngakho-ke uma uxabana ungabona ukuthi izimpawu zakho ziba zimbi kakhulu. Futhi ngasendleleni, uma uzothatha imoto, tngokuqapha okukhulu emgaqweni.
Manje njengoba sesibonile ukuthi yini inkungu, ake sibone ukuthi iyini inkungu. Inkungu futhi iyi-hydrometeor, eyakhiwa ngamaconsi amanzi amancane kakhulu, aphakathi kwama-micrometer angama-50 kuya kwangu-200 ububanzi. Zinciphisa ukubonakala okuvundlile ebangeni lekhilomitha elilodwa noma ngaphezulu.
Kwenzeka ngokwemvelo ngezinqubo zasemkhathini noma ngumphumela wokuqhuma kwentaba-mlilo, futhi kwenzeka kaningi lapho emkhathini kunomoya obandayo ongaphansi kwesimo esipholile. Enkungwini umoya ngokuvamile awuzizwa unamathela futhi unomswakama futhi umswakama ohlobene ungaphansi kakhulu kwamaphesenti ayi-100. Esinye sezici zayo ukuthi yakha iveli elincane elimpunga / eliluhlaza okwesibhakabhaka elihlanganisa ukwakheka komhlaba.
Futhi inkungu yehluke kanjani kunenkungu?
Bahlukaniswe ngokuyisisekelo ngokuzibuka. Ake ngichaze: inkungu ayikuvumeli ukuthi ubone ngaphesheya kwe-1km, ngenkathi inkungu yenza. Ngaphezu kwalokho, umoya uma kunebhange lenkungu unamathela futhi unomswakama, ngoba umswakama ohlobene usondele ku-100%.
Sizokwazi nokuthi uma kuyinkungu nini asikwazi ukubona imisebe yelanga. Inkungu, ekubeni incane kakhulu, izosivumela ukuthi siyibone ngaphandle kwezinkinga eziningi kakhulu; Ngakolunye uhlangothi, ngenkungu engeke yenzeke.
Ngiyethemba ngikucacisile ukungabaza kwakho ngalezi zimo zezulu ezimbili ezimangaza izingane nabantu abadala kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Inkungu nenkungu
Indatshana enhle kakhulu. Ngiyabonga 🙂
Ngiyajabula ukuthi kukusizile, Alexis 🙂
U-Ed Velasquez. kusho
Sanibonani, ngifisa ukwazi ukuthi ngabe kukhona enikwaziyo mayelana nenye i-hydrometeor yokumiswa ebizwa ngeGael… Ngiyacela, angitholi lwazi ngalokhu. Futhi le ndatshana iyathakazelisa kakhulu futhi ngiyithande kakhulu. Ngiyabonga 😀
Phendula u-Ed Velásquez.
Ayikhali insimbi 🙁. Bengilokhu ngiphenya futhi angitholanga lutho futhi.
Engingakutshela khona ukuthi lo gale, okuyigama lesiNgisi elisho umoya omkhulu, yimimoya enamandla kakhulu engaphezu kuka-50km / h, kodwa akukho okunye.
Siyajabula ukuthi uthole lesi sihloko sithakazelisa.
USergio Loyola J. kusho
Sawubona Monica, ngiyabonga ngokusikhombisa ngendlela enobungcweti nobuchwepheshe, incazelo yakho yinhle kakhulu, kulula ukuyiqonda futhi ilusizo kakhulu.
Ukubingelela okuvela eChile, nibe neviki elihle.
Phendula uSergio Loyola J.
Siyabonga ngamazwi akho, uSergio 🙂
ULiliana Cabral kusho
Incazelo yakhe ingaphezu nje kokuhle, ingivumele ukuba ngazi umehluko phakathi kwalezi zenzakalo ezimbili futhi ngaleyo ndlela ngichaze lezo abazilungisayo ngaphandle kokwazi inkulungwane. Ngiyabonga Mónica Sánchez
Phendula uLiliana Cabral
Ngiyabonga, Liliana 🙂
URuben Rodriguez Cruz kusho
Imininingwane emikhulu, ngiyabonga kakhulu, imikhonzo evela eMexico
Phendula uRubén Rodríguez Cruz
U-Omar Quispe Molina kusho
Sawubona Monica Sanchez
Ngiyabonga ngokusichaza ngendlela efundisayo nenobungcweti, umusa omkhulu engihlala kuwo eCusco futhi angazi ukuthi hlobo luni lwesimo esenzeka endaweni engihlala kuyo, iMarcapata - Quispicanchin - Cusco, ngingakuthokozela uma unganginika lolo lwazi ...
Phendula u-Omar Quispe Molina
Siyabonga ngamazwi akho.
Noma yikuphi kwalezi zimo ezimbili kungavela uma kuhlangatshezwa izimo ezifanele.
Uma ufuna ukwazi, nganoma yisiphi isikhathi, uma kukhona inkungu noma inkungu, ungalayisha isithombe kuwebhusayithi efana neTinypic noma i-Imageshack, bese ukopisha isixhumanisi lapha.